Tarika REBIKA Hamalifaly ny mpankafy any Toamasina
Jean Théodore Ranjivason Namoaka boky hanatsarana ny fanabeazana
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly alakamisy 22 martsa tetsy amin’ny IKM Antsahavola ny boky vaovao nosoratan’ny profesora Jean Théodore Ranjivason mitondra ny lohateny hoe « Fampanjariana ny fanabeazana ».
Henan’omby avy aty Madagasikara 600 000 Ar ny kilao any Sina
Manondrana omby any Sina i Madagasikara. 1 000 000 Ariary ny hividianan’ny kelimaso ny ombin’ny Malagasy. Rehefa tonga any Sina anefa dia 600 000 Ariary ny kilaon’ny henan’omby. Raha atao hoe 500 kilao ny omby iray dia tafavoaka hatrany amin’ny 300 000 000 Ariary ny vidiny.
45 % n’ny fanondranana vatosoa maneran-tany Miainga ao Atsimo Andrefana
Azo atao tsara ny mampandroso an’i Madagasikara sy manala ny vahoaka Malagasy ao anatin’ny fahantrana. Fanoitra fototra ho an’ny fampivoarana ny fiarahamonina Malagasy ihany koa ny fanandratana ny kolontsaina isam-paritra, hoy ireo mpikambana ao amin’ny “Planet Renew”.
Mpivarotra finday amoron-dalana Mitombo isa hatrany eto an-drenivohitra
Mitombo isa hatrany ireo mpivarotra finday amoron-dalana eto an-drenivohitra amin’izao.
Fahatapahan’ny herinaratra Notebahan’ny Jirama ny Airtel
Nisy fahatapahana ny tambajotra Airtel ny talata 20 martsa lasa teo, nanomboka ny maraina ka hatrany amin’ny tamin’ny 4 ora tolakandro tany ho any.
Malagasy miaina anaty lainga Nandova an’Ikotofetsy sy Imahaka, hoy ny manampahaizana
Efa zary lasa fahazarana ho an’ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny mifanambaka sy mifampihatsaravelatsihy, raha ny nambaran’ireo mpandinika.
Raharaha Antsakabary Mitohy ny bemarenin’ny fanjakana
Herinandro mahery izay no niparitahan’ny horonantsary mahonena maneho ny fampijaliana vahoaka tany Antsakabary ny volana febroary 2017. Nofatorana, nampandohalihana, norahonana, nodarohana…
Noho ny fangatahan�ny maro dia hamalifaly ireo mpankafy azy any Toamasina indray ny tarika Rebika amin�ny faran�ny herinandro ity.
Ny zoma ho avy izao manomboka amin’ny 9 ora alina no hisantarany izany ao amin’ny trano fisakafoanana Le bateau Ivre, hafanain’ny mpikambana rehetra ao amin’ny tarika toa an’i Heritiana, Tonton Pà, Rampal, Lucien Randrianina … Hitohy ny alahady hariva amin’ny 3 ora folakandro ny fampisehoana ka ao amin’ny gymnage Soavita indray no hanaovana izany izay mahazaka olona manodidina ny 600 isa eo ho eo. “Ngeza makadiry” no anarana nampitondraina ny hetsika izay mandrefy sahady ny halehiben’ny fampisehoana hotanterahin’izy ireo raha araka ny fanazavan’i Rampal tamin’ny mpanao gazety omaly. Hira manodidina ny 100 eo ho eo no hotanterahin’izy ireo mandritra ny hetsika, hira izay marihina fa anisan’ny be mpankafy sy nahafantarana azy ireo avokoa raha havondrona anaty kapila mangirana DVD iray kosa ny hira 30 voafantina anisan’ny tsara indrindra, hamidy mandritra ireo roa andro ireo hankafizin’ny mpankafy rehetra. Marihina moa fa ny fikambanana Ranja média no mpikarakara ny hetsika.